RASMI: Garsooraha dhex-dhexaadin doona kulanka Final-ka FA Cup-ka oo lagu dhawaaqay – Gool FM
(London) 29 Abriil 2019. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa ku dhawaaqay in garsoore Kevin Friend uu dhex-dhexaadin doono kulanka bisha soo socota dhici doona ee Final-ka FA Cup-ka.
47-sano jirkaan Friend ayaa garsoori doona kulanka kama dambeysta FA Cup kaasoo garoonka Wembley ku dhex-mari doona kooxaha Manchester City iyo Watford maalin Sabti ah 18 bisha May ee soo aaddan.
Constantine Hatzidakis iyo Matthew Wilkes ayaa dhankooda loo magacaabay inay caawiyaan garsoore Friend oo ay ahaadaan calan wadayaasha kulankaas, halka Graham Scott iyo Edward Smart ay kala yihiin sarkaalka afaraad ee ciyaarta iyo heeganka garsooraha caawinaya haddii ay xaalad deg deg ah timaado.
Andre Marriner ayaa noqon doona garsooraha fariisan doona muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR kulankan, waxaana uu halkaas kula biiri doonaa Stockley Park iyo Harry Lennard oo fadhiya shaashadaha hortooda si ay ula socdaa aaladda VAR.
Friend ayaa ka mid ah koox garsooreyaal ah kuwaasoo si rasmi ah loogu soo dalacsiiyey horyaalka Premier League sanadkii 2009-kii.
Waxa uu dhex-dhexaadiyey kulankii FA Community Shield ee sanadkii 2012-kii garoonka Villa Park ku dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City iyo sidoo kale Final-kii League Cup ee sanadkii 2013 ay garoonka Wembley ku wada ciyaareen kooxaha Bradford iyo Swansea.